Abahlobo bethu kwi-HipMunk, ithuluzi elimangalisayo lokufumana iindiza ezinokubaluleka kakhulu kunye neehotele, kutshanje kwenziwa uhlalutyo olumnandi malunga nokuba lukhulu kangakanani ikhefu lokubhabhisa i-ski - kunye nalapho kufuneka usuqabhe ukuba ufuna ukusika loo ndleko.
Ngoko, bakwenza njani? Okokuqala, basebenze uluhlu lwamanxweme aseMelika abadume kakhulu kwiindawo zokungcebeleka, ukufika kwiindawo zokungcebeleka ezingama-16 ukuhlola (eColorado, eCalifornia, e-Utah, e-Montana, eVermont kunye naseNew Mexico, kwaye ke wanyunyuza amanani abo ukuba aqikelele iindleko eziqhelekileyo kwiindawo zokuhlala ngexesha leenyanga kaFebhuwari noKwindla, kwaye kwakhona kwenzelwe iindleko zokukhupha ithikithi, kunye.
Nantsi into abayijonga ngayo:
Uhambo luya kubini abantu abadala abadala, ngokuthengwa kwendiza yokuhamba ngokujikeleza nganye
Ukuhlala ubusuku obune ehotele
Ithekiti yokuphakamisa imihla emithathu
Nantsi Yiyiphi Idatha eveziwe:
I-Vail, iColorado yafika kwixabiso elingu-4,572.
I-Aspen, iColorado yayingasemva, i-$ 4, i-226. (Qaphela: i-winter ye-winter ski vacation efike kwi-$ 3,466. Nangona kunjalo, i-Winter Park ibona uhambo olubi kakhulu lweendawo zonke, kunye neendawo ezikufuphi kwinqwelo-moya yaseDenver kunye neendleko eziqhelekileyo zehotele i $ 139 ngobusuku).
Iindawo zokuhlala eCalifornia neNevada zathi zanikela ngeendlela ezilungileyo, ngokulinganiselwa kuma-$ 2,193. (I-South Lake Tahoe ikhangeleka ngokukodwa, ngeendleko eziqhelekileyo zehotele ezili-$ 147 ubusuku bonke, okuyingxenye yesiqingatha seendleko kwi-Vail.)
Izikhefu zengqungquthela zaseVermont nazo zibonakala zingabizi; Iindleko zeeholide eziqhelekileyo ze-Stowe, umzekelo, yi-$ 2,248. Bona ingxelo epheleleyo ye-HipMunk apha.
Unomdla malunga nendlela yokuhlawula iholide lakho ? Ingaba ngumsebenzi onzima, kodwa ukuba unokwesikhwama-ntliziyo, kubalulekile ukuqaphela ukuba ungayichitha ixesha elingakanani ngaphambi kokuqalisa uhambo.
Ukufakwa, amathikithi aphakanyisiweyo kunye neentambo zomoya zibiza kakhulu-kodwa ke wongeza kwixesha lokutya, iziphuzo zokupaka i-ski, i-gear, ukuthutha komhlaba, kunye ne-etera-kwaye iindleko zingadla i-rocket.
I-Oof, isabi kakhulu? Funda ezi zi-13 iingcebiso zokugcina ikhefu, kwaye uqale ukulungiselela unyaka ozayo.
Ngoko Ungayigcina Njani Kwiholide Yase Ski?
Ihotele ye-HipMunk kunye nophando lwe-airfare yindlela elula yokufumana amaqhinga amahle kwiindawo zomoya kunye nokulala. Ukuba ufuna uncedo oluthile oluncinane, khangela ezi ngcebiso zengcali:
Wakha Wayazibuza Indlela I-Ski Bums Efumana I-Cheap Resort yamaHlathi yokuhlala kuyo yonke ixesha lexesha elide?
10 Iingcingo zeZindleko zeSukhethi ezithengiweyo
25 Amaqhinga okuchitha i-Skiing Esingaphantsi
Indlela Yokugcina Imali Ngokusuka kwiindawo zokuHlala kufuphi neApeports
Indlela Yokufumana Iingcebiso Zokundwendwela kwe-Ski Ski
Ukupaka i-Your Own Lunch and Save up to $ 50 Ngosuku kwii-Ski Resorts
D ungayi kuthenga: Iingubo zemihla ngemihla onokuzicima
Yintoni ehamba phambili:
Ngaba Unokwenqabela Ngokwenene Ukunyuka Kwezulu? Nantsi indlela
Izithandwa ze-Snow, Izixhobo eziMnandi kunye neNqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqhqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
I-PHOTOS: Ngaba iSouth Korea iya kulungela ii-Olimpiki ze-2018?
Indlela yokufumana i-Skiing Stickers yamahhala
S o ... Ufuna Ukufumana Tattoo ye-Ski?
Indlela yokudlala Iifomathi yeChampionship Golf Tournament
Iingoma ezi-10 ze-Rock Cover Iingcono kunabakuqala
Iindlela ezimbini-Iingcebiso Iqendu 3: I-Horizontal / Vertical
Ph.D. kwi Psychology okanye Psy.D.